Wararka Product |
Dhalada dhalada ah ee Reed Diffuser
Dhalo Caddaan ah
Dhalada khamriga ah
Dhalada Kaydinta Dhalada
Dhalooyinka dhalada ah
Dhalooyinka Kala duwan ee Saliida Muhiimka ah
by admin 21-12-05
Haddii ay dhibaato kaa haysato sidii aad u heli lahayd dhalada dhalada ah ee ugu fiican saliidaha lagama maarmaanka ah, waxa laga yaabaa in aad niyad jabto ka dib marka aad ogaato in ay jiraan noocyo badan oo dhalo dhalo ah oo aad diyaar u tahay. Laga soo bilaabo dhalooyinka iyo dhalooyinka wax lagu rido ilaa iyo dhalooyinka wareegsan ee Boston iyo dhalooyinka rollerka, waxaa jira ...
Sida loo dhalaaleeyo Alaabtaada DIY ee daryeelka maqaarka
Haddii aad jeceshahay alaabta daryeelka maqaarka ee guriga lagu sameeyo, maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad ku rakibto baakadaha si aad u kaydiso waxyaabahaaga. Aynu ka hadalno qaar ka mid ah weelasha qurxinta dhalada ah ee aad u baahan tahay, alaabooyinka la isku qurxiyo ee ay sida ugu fiican ugu shaqeeyaan, iyo midabka dhalooyinka qurxinta ee aad adigu...
Maxay saliidaha lagama maarmaanka ah ugu yimaadaan dhalooyinka saliidda lagama maarmaanka ah ee midabka madow?
Saliidaha muhiimka ah, walxaha udgoonka ee laga soo saaro ubaxa, caleemaha, afkoda, xididdada iyo miraha dhirta. Waa geed saafi ah, quruxda dabiiciga ah iyo alaabta daryeelka maqaarka. Intaa waxaa dheer, saliidaha lagama maarmaanka ah waxay leeyihiin saameyno kala duwan sida hagaajinta midabka maqaarka, maqaarka oo adkeynaya, yaraynta qallafsanaanta ...
Sidee loo doortaa soosaarayaasha dhalada qurxinta ee dhamaadka-sare?
Warshadaha isqurxinta ayaa baakaddooda ku isticmaala agabyo kala duwan oo ay ku jiraan baco iyo biraha, iyadoo muraayaddu ay ka mid tahay agabkii ugu da'da weynaa. Waqtigan xaadirka ah, suuqa baakadaha qurxinta ee dhamaadka-sare, wax-soo-saarayaashu waxay wali doorbidaan baakadaha dhalada. Tani waa ma...
Sidee loo doortaa dhalo saabuunta dhalada ah?
Dhalada loo isticmaalo in lagu xidho nadiifiyaha gacmaha waxa loo yaqaan dhalada gacmo nadiifiyaha. Tan iyo bilowgii sanadkan, suuqa baakadaha nadiifiyaha gacmaha ayaa ahaa mid kacsan. Ugu horreyntii, cudurka faafa ee adduunka oo dhan ka dillaacay awgeed, baahida suuqa ee dhalo nadiifiyaha ah...
Codsiga PLC ee ku jira xakamaynta baakadaha dhalada dhalada
Dhalooyinka iyo gasacadaha, Baakadaha baaldiyada, Kontoroolka barnaamijka, Habaynta qalabka, Nakhshad software. Iyada oo kor u kaca joogtada ah ee tayada dhalooyinka dhalada ah (oo ay ku jiraan muuqaalka nadaafadda), habka baakadaha bacaha qoryaha ee dhaqameed wuxuu awoodi waayay inuu la qabsado Wax soo saarka cayriin ...
Helitaanka aragga kombiyuutarka ee cabbirrada dhalada dhalada
Habka kormeerka tayada alaabta dhalooyinka, oo leh ballaarinta miisaanka wax-soo-saarka, hagaajinta xawaaraha wax-soo-saarka iyo shuruudaha tayada dheeraadka ah ee adag, hababka dhaqameed ee baaritaanka buug-gacmeedku hadda ma awoodaan. Xaaladdan oo kale, shirkado badan oo ajnabi ah ayaa bilaabay. ..
Fadlan la xidhiidh si aad u dalbato!
Qolka 417-1, No. 1000, Xinsongjiang Road, Shanghai, Shiinaha
Baakaynta iyo rarista